» मिस ग्लामरमा कसको भोट कति ?
मिस ग्लामरमा कसको भोट कति ?
२६ बैशाख २०७६, बिहीबार १६:०३
चन्द्र घलान, मकवानपुर, २६ बैशाख । मिस नेपाल २०१९ को फाईनल आज साँझ किर्तिपुरको ल्याब्रोटरी स्कूलमा हुँदैछ । फाईनल शोमा पुग्नुपूर्व मिस नेपालका उत्कृष्ट २५ प्रतियोगीहरुले मिस पपुलर च्वाईस, मिस ग्लामर, मिस एथलेट, मिस फेस अफ फ्यासिनो, मिस ब्युटीफुल हेयर लगायतका विभिन्न सबटाईटलहरुमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । मिस नेपाल २०१९ को उपाधि बाहेक अन्य उपशिर्षकका विजेताहरु लगभग अन्दाज गर्न सकिएको अवस्थामा छन् भने घोषणा आजको फाईनलमा नै हुनेछ । यस सामाग्रीमा हामीले ‘बर्जर मिस ग्लामर २०१९’ प्रतियोगितामा कुन प्रतियोगिले कति भोट प्राप्त गरे भन्ने बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरेका छौँ ।
बर्जर मिस ग्लामर २०१९ को भोट एण्ड उईन अफरका लागि बर्जर पेन्ट्स नेपालको अफिसियल फेसबुक पेजमार्फत भोटिङको व्यवस्था गरिएको थियो । उत्कृष्ट २५ प्रतियोगीका तस्बिरहरुमा प्राप्त कमेन्ट, लाईक र शेयरका आधारमा उनीहरुमध्ये सर्वाधिक भोट प्राप्त गर्नेलाई मिस ग्लामरको छनौटमा केही प्रतिशत भोट प्राप्त हुने थियो । भने भोट गर्ने मध्ये भाग्यशाली विजेताले मिस ग्लामरसँग डिनरको अवसर पाउने थिए । साथै केही सहभागीलाई मिस नेपालको फाईनलमा टिकको समेत व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा शेयर गरेको ३ अंक र लाईक गरेको १ अंक तोकिएको थियो । मिस ग्लामरको भोट एण्ड उईन प्रतियोगिताको भोटिङ २९ अप्रिलदेखि ७ मे सम्म संचालन गरिएको थियो ।
यस प्रतियोगितामा प्रतियोगि नम्बर १ निशा पाठकको फोटोमा ६७२ लाईक, ५९ कमेन्ट र २ हजार ९ सय लाईकहरु गरिएका थिए । त्यस्तै प्रतियोगि नम्बर २ एलिशा जोशीको फोटोमा ८०७ लाईक, १६४ कमेन्ट र ३४२ शेयरहरु गरिएका थिए । प्रतियोगी नम्बर ३ सोफिया भुजेलको फोटोमा २ हजार ३ सय लाईक, ३९० कमेन्ट र ४७० शेयरहरु गरिएका थिए । त्यस्तै प्रतियोगी नम्बर ४ रिया बस्नेतको फोटोमा १ हजार ८ सय लाईक, ३ हजार १ सय कमेन्ट र ६ हजार शेयरहरु गरिएका थिए र प्रतियोगी नम्बर ५ सँस्कृति घिमिरेको फोटोमा ५४३ लाईक, २७ कमेन्ट र ५९ शेयरहरु गरिएका थिए । त्यस्तै प्रतियोगी नम्बर ६ अनुष्का श्रेष्ठको फोटोमा १ हजार १ सय लाईक, २१८ कमेन्ट र ३८९ शेयरहरु गरिएका थिए । प्रतियोगी नम्बर ७ जेन्नी महर्जनको फोटोमा २४३ लाईक, १४ कमेन्ट र ४६ शेयरहरु गरिएका थिए । प्रतियोगी नम्बर ८ अस्मिता महर्जनको फोटोमा २ हजार ६२० लाईक, ११६ कमेन्ट र १५९ शेयरहरु गरिएका थिए । प्रतियोगी नम्बर ९ किरण थापाको फोटोमा १०७ लाईक, ३ कमेन्ट र ३ शेयरहरु र प्रतियोगी नम्बर १० प्रदिप्ता अधिकारीको फोटोमा १ हजार १ सय लाईक, ३२० कमेन्ट र ४९६ शेयरहरु गरिएका थिए ।
त्यस्तै प्रतियोगी नम्बर ११ नितिका कर्मचार्यको फोटोमा ५५९ लाईक, १४२ कमेन्ट र २९७ शेयरहरु गरिएका थिए । प्रतियोगी नम्बर १२ रोज लामाको फोटोमा ९५४ लाईक, ५७२ कमेन्ट र २ हजार २ सय शेयरहरु गरिएका थिए । प्रतियोगी नम्बर १३ सारा बजिमयको फोटोमा ३७९ लाईक, ७५ कमेन्ट र ५ हजार शेयरहरु गरिएका थिए । प्रतियोगी नम्बर १४ लक्ष्मी राउतको फोटोमा २६८ लाईक, ४२ कमेन्ट र ४११ शेयरहरु गरिएका थिए र प्रतियोगी नम्बर १५ रक्षा उप्रेतीको फोटोमा ३०७ लाईक, ८६ कमेन्ट र ९४ शेयरहरु गरिएका थिए । प्रतियोगी नम्बर १६ मिरा कक्षपति फोटोमा १४३ लाईक, ७ कमेन्ट र ९ शेयरहरु गरिएका थिए । प्रतियोगी नम्बर १७ जेनिशा थपलियाको फोटोमा ७४८ लाईक, २१५ कमेन्ट र ३९१ शेयरहरु गरिएका थिए । प्रतियोगी नम्बर १८ पुजा श्रेष्ठको फोटोमा १ हजार लाईक, १ हजार कमेन्ट र ४५८ शेयरहरु गरिएका थिए । प्रतियोगी नम्बर १९ बिपना सुवेदीको फोटोमा ६५१ लाईक, ७ हजार ८ सय कमेन्ट र १० हजार शेयरहरु गरिएका थिए । र प्रतियोगी नम्बर २० सुभेच्छा अधिकारीको फोटोमा २४६ लाईक, ५१ कमेन्ट र ८४ शेयरहरु गरिएका थिए ।
त्यस्तै प्रतियोगी नम्बर २१ प्रकृति कट्वालको फोटोमा ५६४ लाईक, १७० कमेन्ट र २०९ शेयरहरु गरिएका थिए । प्रतियोगी नम्बर २२ न्यान्सी बोगटीको फोटोमा ३८६ लाईक, ३२ कमेन्ट र १६६ शेयरहरु गरिएका थिए । प्रतियोगी नम्बर २३ शिवानी घिमिरेको फोटोमा १ हजार १ सय लाईक, ५२७ कमेन्ट र ९७१ शेयरहरु गरिएका थिए । प्रतियोगी नम्बर २४ सान्त्वना मालाकारको फोटोमा १ हजार ४ सय लाईक, ३ हजार ८ सय कमेन्ट र ७ हजार ७ सय शेयरहरु गरिएका थिए । त्यस्तै अन्तिम प्रतियोगी नम्बर २५ प्रथा अधिकारीको फोटोमा १५८ लाईक, १४ कमेन्ट र ४० शेयरहरु गरिएका थिए ।